Wefti uu hogaaminayo raysal wasaaraha xukuumadda faderaalka Soomaliya oo Garoowe soo gaaray – Radio Daljir
Wefti uu hogaaminayo raysal wasaaraha xukuumadda faderaalka Soomaliya oo Garoowe soo gaaray
Garowe,Feb 14 -Raysal wasaaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Weftiga uu hogaaminayo raysal wasaaraha oo ay ka mid yihiin xubno wasiiro ah,ayaa waxaa kusoo dhoweeyay caasimadda Puntland ee Garoowe masuuliyiin katirsan dowladda Puntland oo ka kooban golaha fulinta iyo golaha sharci dajinta Puntland.
Raysal wasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shir jara’id ku qabtay Garoowe,ayaa waxaa uu sheegay imaanshiyihiisa inay qayb ka tahay ka qaybgalka shirka Garoowe2 oo la filayo maalinta beri inuu ka furmo Garoowe.
Waxaa uu sidoo kale raysal wasaaraha uu tilmaamay shirka Garoowe ee furmi doona maalinta beri in diiradda lagu saari doono arimaha faderaalka iyo xiriirka maamulada iyo dowladda dhexe ee dalka.
Raysal wasaare Cabdiwali Maxamed Cali “Gaas” ayaa dhinaca kale sheegay madaxwaynaha dowladda faderaalka Shariif Sheekh Axmed inuu kasoo qaybgali doono shirka berito furmi doona ee Garoowe 2 oo la filayo inuu socdo muddo laba casho.